"Umsebenzi 3.0"Emhlabeni Wezokumakethwa Kwewebhu Kwamabhizinisi
I-Brand I-TrovaWeb, neyakhe Umjikelezo Wokuhlelwa Kwedijithali kwakheka Izingxenye eziyi-12 ezihlanganisiwe, kuyithuba elihle kakhulu lokukwenza Business emhlabeni we Ukukhangisa kwewebhu ivulekele bonke.
Iphrofayili ephezulu nemiphumela emihle yokubambisana kwezezinkampani sekuvele kuqaliwe Umjikelezo wethu ngayo izinto zebhizinisi e ochwepheshe kulo lonke elase-Italiya. Kusuka eGrand Isikhungo indawo ehlelekile, al I-Direct Commerce Partner ebudlelwaneni obulula bokusebenzisana noma ukude: iqiniso lethu linikeza ithuba lokwenza ibhizinisi kochwepheshe bazo zonke izigaba.
Ngabe uyathanda ukuhleleka futhi unembile isici sakho esisobala kakhulu?
Lapho-ke ungumuntu olungele indima ye unobhala. Sifuna izibalo ze Unobhala ofanelekile ngamakhono aphawulekayo enhlangano kanye namandla okuphatha imininingwane kanye nama-ajenda.
Phakathi kwezidingo zesibalo se- unobhala, bayaziswa:
- Isipiliyoni endimeni;
- Amakhono amahle kakhulu wokuxhumana nabantu kanye nezokuxhumana;
- Amandla nokujwayela ukusebenza ngenhlangano, ukuhlela, ukuhambisana ngokuqinile nezinsuku zokugcina, izinto eziza kuqala, izikhundla zangaphakathi;
- Ukuthembeka, isibopho kanye nesimo sengqondo sobuchwepheshe;
- Ukusetshenziswa okuhle kakhulu kwe-PC, iphakheji yeHhovisi: iZwi, i-Excel, i-imeyili.
Ngabe unentshiseko enkulu futhi uyathanda yini ukubandakanya abantu abanemibono namaphrojekthi amasha? Lapho-ke ungumuntu ofanelekele ukubalwa Iphromoshini. Lezi zibalo zizosebenza kakhulu ngokwethula izinsizakalo zeNkampani, ngenhloso yokuthola amakhasimende amasha.
- ukubukeka okucocekile;
- amakhono okuxhumana aqinile;
- ukuzimisela ekufezeni izinjongo;
- amakhono nokusebenzelana okuhle nabantu;
- amakhono ayisisekelo wokusebenzisa ikhompyutha ne-Google ne-Office Suite.
Ingabe ungumuntu onobuciko futhi uyathanda ukuziveza ngemifanekiso? Ngemuva kwalokho ungaba yi umklami wemifanekiso besikufuna.
Nazi izici esizifunayo kufayela le- Umklami wezithombe: okokuqala nje ubuhlakani obukhulu, obuhlanganiswe nobulukhuni, ukunemba nokuqhuma okukhulu kwemicabango okugcina wonke umuntu ethe njo kusikrini!
Phakathi kwezidingo eziyinhloko:
- Ulwazi lwe-Photoshop, Illustrator, InDesign;
- Ulwazi lwe-Adobe Suite;
- Amandla okusebenza ngezinsuku zokugcina eziqinile;
- Team umsebenzi ukuthambekela;
- Ukugcina isikhathi ekusetshenzisweni kwamaphrojekthi.
Uyisangoma se- Ukuxhumana nomphakathi futhi wazi konke ngezenzo zokukhulisa i-lwekucocisana? Ngemuva kwalokho faka isicelo sesikhundla se- Umphathi wezeMphakathi. Lesi sibalo sizozinikela emisebenzini yokuxhumana yedijithali, ukuphathwa kwezinkundla zokuxhumana zamakhasimende zombili ngokomsebenzi wezinto eziphilayo nokukhangisa nokubika. Kuzodingeka futhi ukuthi ikwazi ukwelapha i- ukukhiqizwa kokuqukethwe ukusatshalaliswa kuzinkundla ezahlukene zomphakathi futhi kumele kube nokuzimela ekulungiseleleni nasekuphathweni kwe ukukhangisa komphakathi. Phakathi kwemisebenzi yakhe eyinhloko, uzonakekela:
- Yakha, gcina futhi uthuthukise idumela lomkhiqizo wamakhasimende ku- social media; - Yenza kusebenze izenzo zokwandisa izethameli;
- Khiqiza okuqukethwe okuhehayo, okuhehayo, koqobo nokwamandla;
- Hlela futhi uphathe Izikhangiso e imikhankaso yokuxhasa (isabelomali, umgomo, isikhathi); - Hlela futhi ukhiqize imibhalo yokuhlaziya kanye nokubika ngezikhathi ezithile.
- Ulwazi oluphelele lwezokuxhumana ezithandwa kakhulu (njenge-Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest);
- Isipiliyoni ekuphatheni imithombo yezokuxhumana;
- Amandla wokuthuthukisa imikhankaso nabalingani bedijithali.
Ukukhathazeka ngokubhala okuhle, ukuthambekela kokudala okuqukethwe okubalulekile ihlala ingeyokuqala futhi iyathakazelisa, amandla okuhlaziya ngokujulile kepha futhi nokuhlanganiswa. Nazi ezinye zezici esizifunayo kwezethu Umlobi we-Copy. Abangenele isikhundla se Umlobi we-Copy kufanele futhi babe nokufaneleka kwe Ukubhala kwe-SEO, ekubhaleni nasekudalweni kwe- okuqukethwe okwenzelwe iwebhu. Phakathi kwamakhono amakhulu adingekayo:
- Ulwazi oluyisisekelo lwe-Wordpress ne-Joomla;
- Ubuciko ekukhiqizeni imibhalo;
- Amandla ekusetshenzisweni kwemithetho yokubhala;
- Ijubane nokunemba ngokubhala;
- Ukujwayela ukuphathwa kwama-akhawunti ezenhlalo njenge: Facebook, Twitter kanye ne-Instagram kanye nokuphathwa kwemikhankaso exhasiwe.
- Ulwazi lwenye i-CMS, njenge-Prestashop, luzothathwa njengento ekhethwayo.
I / the Umlobi we-Copy kufanele akwazi ukwenaba, ahlanganise futhi acwenge amathekisthi nokuqukethwe ngokuya ngemithetho eqinile yokubhala ezonikezwa yena emsebenzini. Sincoma ukungathí sina okuphelele, ikhono nomkhuba wokusebenza ngokuhleleka, ukuhlonipha izikhundla zangaphakathi.
Iseva, i-database, i-CMS, ukusingathwa nezizinda: nayi eminye imiqondo eyisisekelo ekulungele konke mphathi wewebhusayithi uyazi njengangemuva kwesandla sakhe. Uma unesizinda esiqinile kulezi zindawo, ungahle ube ngumuntu ofanelekela isikhundla somphathi wewebhu.
Okhethiweyo kufanele abe namakhono alandelayo:
- Isipiliyoni ngamapulatifomu e-Wordpress, Joomla ne-Prestashop;
- Ulwazi oluhle lwe-HTML, i-PHP, i-Mysql, i-CSS, i-Java Script;
- Amandla okuhlangana nokucwenga okuqukethwe okulungiselelwe;
- Ukuphathwa kwedatha namapaneli wokulawula;
- Ubucayi obukhulu kanye nendlela yobungcweti;
- Ukuxazulula inkinga ukufaneleka.
Isimo sengqondo esihle nolwazi phakathi kwabantu ezinkampanini eziphethe ezobuchwepheshe: lawa ngamakhono aphambili esisebenzi Umnyango Wabasebenzi ukuthi sifuna.
- Ukusekelwa kwinqubo yokuqoqa nokuhlaziya izidingo zebhizinisi;
- Ukuphathwa kwezinkontileka kwezomnotho kwabasebenzi nabalingani bebhizinisi;
- Ukuxhumana kwangaphakathi nokulamula phakathi kweminyango;
- Ukuphathwa kwemisebenzi yokuphatha;
- Ukuvuselelwa nokuqaliswa kwezinqubo zokuphatha.
- Ukusetshenziswa okuhle kakhulu kwePhakheji leHhovisi;
- Ikhono elihle kakhulu lokusebenza eqenjini, amakhono okuxhumana nabantu kanye nezokuxhumana;
- Ukuhlela, ukuhlela nokuxazulula izinkinga.
Phuma amakhono okuxhumana ukufaneleka kwe ukuxazululwa kwenkinga yizimpawu eziyinhloko zabasebenzi ku- Ukuphathwa kwamakhasinde esikufunayo.
- Umuntu okhethwe ngokuziphatha okunamandla, onesibopho, wokuthembela ngokuphelele;
- Ukusetshenziswa okuhle kakhulu kwe-PC, iphakheji yeHhovisi: iZwi, i-Excel, i-imeyili;
Izibalo ze umthelela esikufunayo kuzoba nomsebenzi wokunqanda imikhankaso yoxhaso futhi Ukuthengiswa kwe-Influencer ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi athandwa kakhulu, njenge-Facebook ne-Instagram.
Phakathi kwemisebenzi edingekayo, umgqugquzeli kuzodingeka:
- phatha ngokuzimela, ngesisekelo sezinkomba nezinjongo okufanele kufinyelelwe, imikhankaso ehlose ukwanda izethameli ed lwekucocisana yimuphi amakhasi omphakathi enkampani;
- yakha imikhankaso eqondisiwe ukunakekela zonke izici, ngokuhambisana nezinkomba ezitholakele;
- Phatha imibiko ngesikhathi sangempela.
Into ekhethwayo kuzoba yikhono lokwenza amavidiyo futhi ibe nesiteshi YouTube iyaqhubeka kahle.
Uma uneibhizinisi, isitolo, i-ejensi yokukhangisa futhi ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho ngokungeza eyodwa kwiPhothifoliyo yakho Yezinsizakalo Indawo ephelele nethembekile ezinikezelwe ku Ukukhangisa kwewebhu no-al web Design I-GetWeb ikhambi elifanele IZERO THOUGHTS.
Thumela i-ejensi yakho namuhla bese uba yiTrovaWeb POINT edolobheni lakho, gcwalisa ifomu elingezansi bese uzothintwa ngqo yinkampani.
Sikunikeza ithuba lokutshala imali yakho I-TEMPO nokwakho ISITOLO ekuthuthukiseni Izinsizakalo zethu Ukumaketha kweWebhu nokuxhumana kwamabhizinisi. Sinikeza uhlelo IZIFUNDO Uhlelo oluzuzisa kakhulu nolokuQeqesha lokukhulisa ukukhula kwakho siqu nangobuchwepheshe.
Yenza imali nge-Intanethi nomsebenzi okufanele uwenze kahle ekhaya ngezikhathi othanda nangaphandle kwazo akukho ukutshalwa kwezimali: Leli futhi elinye ithuba elinikezwe yiTrovaWeb. Njenge? Mane ngokwabelana ngezixhumanisi ezenziwe ngomumo ku-Facebook noma kwamanye amanethiwekhi omphakathi noma ngokuthumela ama-imeyili ezinkampanini nakwabachwepheshe.
Bheka i-ejensi yakho
Bika i-ejensi yakho namuhla futhi ube yilungu Thola IWebhu yeWebhu yedolobha lakho, gcwalisa lefomu elingezansi futhi uzoxhumana ngqo nenkampani.
Yiba umthengisi nathi
- Akukho ukutshalwa kwezimali
- Ihhovisi Langemuva Nokusekelwa Kwamakhasimende okukhokhelwe yiNkampani
QHAFAZA LAPHA UKUGCWALISA IFOMU